Fihetsiketsehana ataon'ny masoivohon'ny fizahan-tany: fanambarana diso ny fanambarana nataon'ny Minisitry ny fizahantany any Italia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Fihetsiketsehana ataon'ny masoivohon'ny fizahan-tany: fanambarana diso ny fanambarana nataon'ny Minisitry ny fizahantany any Italia
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Minisitry ny fizahantany any Italia tsara sy faly
“Mandeha tsara ny vanim-potoana, nanomboka indray ny foara sy ny kongresy. Tsy homeko ny isa, fa ho fahavaratra mahafinaritra, manakaiky ny 2019, raha tsy mihoatra ny toe-javatra sasany. Raha fintinina, vanim-potoana tena tsara. Izahay dia efa mitady ny ririnina, hamela vanim-potoana milamina, tsy misy fikororohana. ” Izany no nolazain'i Massimo Garavaglia, Minisitry ny fizahan-tany any Italia, nandritra ny fivorian'ny Rimini.
Ny fampiasana teny toy ny mahafinaritra, milamina ary miabo dia tsy izay tian'ny mpiasan'ny fizahan-tany any Italia naheno tamin'ny Minisitry ny fizahantany.
Taorian'ny nanambaran'ny minisitra ny fomba fijeriny tsara momba ny sehatry ny fizahan-tany ao amin'ny fireneny, efa nandre izany ny masoivohon'ny fizahan-tany ary nandefa taratasy fanoherana.
Raha fintinina, nilaza tamin'ny Minisitry ny fizahantany ny Hetsika mahaleo tena misahana ny fizahan-tany italianina, "Tsy izany no marina."
"Ara-tantara", hoy ihany ny Minisitra, "14% amin'ny harin-karena faobe ny fizahan-tany, saingy mety hahatratra 20% izany. Tsy hadalana izany. Manana fahaiza-manao lehibe isika. Saingy mila zavatra sasantsasany isika: ohatra, drafitra ankapobeny ho an'ny sakafo sy divay. Avy eo dia tsy maintsy mikendry ny hanana 60 ITS (Institut Teknika ambony ho an'ny mpianatra fizahantany) toa an'i Espana isika. Raha manana fikambanana farafahakeliny isika dia afaka mahazo fizarana amin'ny tsena. "
Ny hetsi-panoherana nataon'ny MAAVI, (Hetsika mahaleo tena misahana ny fizahan-tany italianina)
Manoloana ny Andro D fahatelo, andro fahiraika ambin'ny folo an'ny olona, ​​nivory tamin'ny 8 septambra tamin'ny 10 ora sy sasany tany Piazza del Popolo any Roma, ny filohan'ny Fikambanan'ny Agence Travel, Enrica Montanucci, dia nandefa hetsi-panoherana ara-dalàna Fizahan-tany any Italia Ny minisitra Massimo, izay vahinin'ny fivoriana Rimini 2021 ary nankalaza ny fahavaratra fizahan-tany italianina ho vanim-potoana firaketana.
Ny taratasy ho an'ny Minisitra avy amin'i Ramatoa Montanucci dia mivaky toy izao:
“Andriamatoa Minisitra Garavaglia:
“Tsy nekena mihitsy ny zavatra nambaranao tao amin'ny Rimini ho an'ny sokajy mpiasan'ny fitsangatsanganana italiana rehetra. Raha amin'ny 'vanim-potoana saika amin'ny ambaratonga 2019' dia manondro ireo olona izay, tsy afaka mandeha any an-kafa, dia nirotsaka tao Trano fizahan-tany any Italia, manome, farafaharatsiny amin'ny famakafakana voalohany, ny fiheverana fa niverina ho toy ny mahazatra ny zava-drehetra, avy eo dia mety hiombon-kevitra aminao koa izahay. T amoron-dranomasina feno, hotely feno, olona manodidina… amin'ny alàlan'ny fanahafana ny hafaliana tsy misy fahavaratra.
“Tsy izany no fahamarinana.
"Na iza na iza miasa amin'ny maha-maso fizahan-tany amin'ny varotra dia nahita olona maro namakivaky ny biraony, namidy (ratsy sy sarotra noho ny tsy fahatokisana sy ny tsy fahampian'ny fanazavana) toerana italiana maro be miady amin'ny famandrihan-toerana amin'ny Internet, miaraka amin'ireo hotely fetsy izay manana matetika dia nanandrana nanantona ny mpanjifa mivantana, mpanjifa natahotra ary tsy resy lahatra, ny vidiny tafaporitsaka hatrany, ary maro hafa. Ny trano fandraisam-bahiny feno dia tsy midika hoe miverina amin'ny laoniny ny fizahan-tany.
"Ny tontolontsika, ny sampan-draharaha misahana ny fizahan-tany mampiasa olona 80,000, izay nandoa hetra mangina nandritra ny taona maro ary tsy mbola nangataka na inona na inona, dia eo am-pamaranana. Niaina fahavaratra iray izahay izay tsy nanana toeran-tany lavitra Eoropeana, nahita volabe nitovy 35% tamin'ny taona 2019, tsy miresaka afa-tsy ireo volana avo-vanona. Maka… Janoary / Jolay, 90% ny fihenan'ny antsalany. Amin'ny ankapobeny, tsy nisy niova.
“Mino ny hafanam-ponao izahay, saingy mino koa izahay fa ny ho avy izay atrehinay dia mitaky fanampiana lehibe izay tsy maintsy omena maika. Noho io antony io dia mety hampidi-doza ary tsy dia ilaina loatra ny famoahana fanambarana diso.
“Avy amin'i MAAVI, noho izany, no ampitahaina aminao ny fangatahana mba hamerana ny fampiasana ratsy sy diso amin'ny haino aman-jery, mba hihainoana ny kiakiakan'ny 'fanaintainana sy famoizam-po' an'ireo mpiasan'ny dia ary, ho an'ireo mpiara-miasa, ny antso miverina hiverina amin'ny arabe tamin'ny 8 septambra. Betsaka kokoa ary mahery kokoa noho ny fotoana farany nanohitra ny antsoantso nataon'ny bla bla bla an'ireo andrimpanjakana, 'Teny ampy. Fotoana izao hisian'ny zava-misy. '”
25 Aogositra 2021 amin'ny 01:51
Mampalahelo fa tany amin'ireo tanànan'ny kanto toa an'i Roma dia tsy tratranay ireo vondrona sy ireo mpizahatany any Eropa.